अष्ट्रेलियाको भिसा आवेदन ‘रिजेक्ट’ हुने कारणहरु के हुन् ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | ६ बैशाख २०७५, बिहीबार ०६:०७ |
मेलबर्न । अष्ट्रेलिया अहिले विश्वको धेरै मुलुकका नागरिकहरुको प्रमुख गन्तव्य बन्दै आएको छ । साथै नेपालीहरुका लागि समेत अष्ट्रेलिया आकर्षणको देश बनेको छ । त्यसैले हरेक वर्ष अष्ट्रेलिया आउँने नेपालीहरुको संख्या पनि बढेको छ । अझै अष्ट्रेलिया आउँन चाहने नेपालीको संख्यामा पनि कुनै कमी भएको छैन । तर केही कुराहरुमा ध्यान नदिदा अष्ट्रेलियाको भीसा आवेदन अस्वीकृत भएका घट्नाहरु पनि छन् । त्यसैले अष्ट्रेलियाका भिसाका लागि आवेदन दिने वा अष्ट्रेलिया आउँदै हुनुहुन्छ भने यी केही कुराहरुमा ध्यान पुर्याऔं । अर्थात अकसर गरिरहने यी गल्तीहरु सुधारौं । अष्ट्रेलिया तपाईको स्वागतका लागि सदैव तयार छ ।
भिसा आवदेन अस्वीकृत हुने प्रमुख कारण आवेदन दिदा बुझाइने विवरण अपुग वा अधुरो हुनु हो । त्यसैले भिसा आवेदन दिदा दिइने जवाफलाई सपोर्ट गर्ने खालका कागजात बुझाउँनुपर्दछ । जस्तो तपाईलाई अरु कुनै नामले पनि चिनिन्छ ? भन्ने प्रश्नमा तपाईले टीक लगाउँनुभएको छ भने तपाईलाई किन र कुन नामले चिनिन्छ,त्यसलाई प्रष्ट पार्ने डकुमेन्टस् बुझाउँन आवश्यक छ । त्यसका लागि नाम परिवर्तन भएको वा दुइटै नाम भएको व्यक्ति एकै हुन् भनी प्रमाणित गर्ने कागजात आवश्यक पर्दछ ।
झुटा र गलत विवरण
यदि तपाईले बुझाउँनुभएको विवरण र कागजात मध्ये कुनै एउटा मात्र झुटो वा गलत पाइयो भने मान्नुस् तपाईको आवदेन सीधै अस्वीकृत भयो । त्यतिमात्र होइन त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई सधैंका लागि अष्ट्रेलिया प्रवेश गर्न नपाउँने गरी कालोसूचीमा राख्ने सम्भावना समेत बढी रहन्छ । साथै कुनै कुनै केसमा त त्यसरी गलत विवरण बुझाउँनेका विरुद्ध दुतावासले ठगी मुद्दा समेत चलाउँन सक्छ ।
आर्थिक सर्पोट प्रमाणित नहुनु :
गलत पेशा :
साथी वा परिवारका लागि पर्यटन भिसामा आवदेन दिनु :
स्वस्थ्यताको सही प्रमाणपत्र नहुनु :
हरेक काम गर्नका लागि स्वस्थ्य हुन अति आश्यक छ । त्यसैले भिसाका लागि आवेदन दिनेले आफ्नो स्वस्थ्यताको सही प्रमाणपत्र बुझाउँनुपर्दछ । अष्ट्रेलियाको भिसाका लागि आवेदन दिनेले एचआइभी एड्स,क्षयरोग र पोलियो लगायतका रोगहरुबाट मुक्त भएको प्रमाणपत्र बुझाउँनुपर्दछ ।
अँग्रेजीमा दक्षता प्रमाणित नगर्नु :
अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी र स्थायी रुपमा बस्न चहनेले आफू अँग्रेजीमा दक्ष भएको प्रमाणपत्र पनि पेश गर्नुपर्दछ । त्यसैले आइएलटीएस,टोफेल लगायतका भाषागत दक्षता पुष्टि गर्ने परीक्षामा उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र बुझाउँन आवश्यक छ । कहिलेकाहीं आवेदकको स्थलगत परीक्षा पनि दिन सक्छन् । त्यसैले अँग्रेजीमा दक्षता प्रमाणित गर्ने कागजात नहुँदा पनि भिसा आवेदन अस्वीकृत हुन सक्छ ।
प्रोफेशनल सहयोग नलिनु :
हरेक कामका लागि विज्ञ र दक्षहरुको सहयोग आवश्यक पर्दछ । त्यसैले तपाई अष्ट्रेलियाका लागि भिसा आवेदन दिदै हुनुहुन्छ भने विज्ञहरुको अवश्य परामर्श लिनुहोला । विशेष गरी अष्ट्रेलियाको कानूनी र सामाजिक विषयका ज्ञाता,भिसाका प्रकार र आवश्यक कागजातहरुका बारेमा पूर्ण रुपमा ज्ञान र अनुभव भएकाहरुको परामर्श लिनु राम्रो हुन्छ । कहिलेकाहीं आफै आफैं जान्ने छु भन्ने गल्तीले पनि भिसा आवेदन अस्वीकृत हुन सक्छ ।
स्रोत : फेसबुक र विभिन्न अनलाइन
Previousअष्ट्रेलियाली क्रिकेट टिमको नयाँ प्रशिक्षकमा जस्टिन ल्यांगर
Nextयस्तो बानी भएका व्यक्तिसंग नगाँस्नुहोस् प्रेम-सम्बन्ध
नेकपाको उपाध्यक्षमा वामदेव गौतम प्रस्तावित,३२ विभागको टुंगो लाग्यो
३१ श्रावण २०७६, शुक्रबार १०:४४
२५ कार्तिक २०७५, आईतवार ०२:३२
३ भाद्र २०७६, मंगलवार १२:०६